» ६६ लाखको टेलिभिजन, कहाँ हेर्ने ? कहाँ राख्ने ?
३ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०६:३९
एजेन्सी, ३ जेठ । वैज्ञानिक युगमा धेरैजसो वैज्ञानिकहरुले अचम्म लाग्ने र असम्भव जस्तो देखिने आविस्कारहरु गरेर विश्व समुदायलाई सहजता तर्फ अग्रसर गराएको छ । अर्कोतर्फ यसको असर पनि मानव समुदायमा भने नपरेको होईन । आज यस्तै वैज्ञानिक आविस्कारको उपज स्वरुप विकसित भएको टेलिभिजनको ठूलो रुपका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ ।
तपाई आफ्नो घरको लागि कस्तो टेलिभिजन छनौट गर्नुहुन्छ ? अवश्य पनि घर सुहाउँदो र आफ्नो बजेट सुहाउँदो टेलिभिजन खरिद गर्नुहुन्छ । खरिद नगरेता पनि ठूला स्क्रीनका टेलिभिजनका बारेमा पनि तपाईले कल्पना गर्नुभएको हुनसक्छ । जुन टेलिभिजनलाई हामी केही हजारदेखि १ लाखभित्रको बजेटमा किन्न चाहानेहरु छौँ । तर के तपाईले ६६ लाखको टेलिभिजनको बारेमा सुन्नु भएको छ ? समाचार पढ्नुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईले यसका बारेमा थाहा पाईसकेको हुनुपर्छ । यदि छैन भने हामी त्यसका बारेमा यहाँ चर्चा गर्दैछौँ ।
सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा अर्थात आजभन्दा करिब ६ वर्षअघि नै दक्षिण कोरियाली कम्पनी सामसुङले विश्व त्यसबेलासम्मकै ठूलो आकारको घरायासी टेलिभिजन सार्वजनिक गरेको थियो । युएचडी टिभी ११० नाम दिइएको उक्त टेलिभिजनको स्क्रिन ११० इन्च अथार्ग झण्डै साढे २ मिटरको रहेको थियो । निकै अत्याधुनिक प्रविधिहरु समेत जडान गरिएको उक्त टेलिभिजन कम्पनीले बजारमा बिक्रीका लागि समेत पठाएको थियो ।
त्यसभन्दा अघि नै सामसुङले ९८ इन्चको एस नाइन हाइ डेफिनेसन टेलिभिजन भने बजारमा ल्याईसकेको थियो । त्यस पश्चात नेपाली रुपैयाँ ६६ लाख पर्ने उक्त टेलिभिजन त्यस समयमा जर्मनीको बर्लिनमा आयोजित व्यापार मेलाका क्रममा उक्त ठूलो टेलिभिजन सार्वजनिक गरिएको थियो । उक्त अवसरमा सामसुङले दुई जना मान्छेले एकैचोटी दुई वटा च्यानल हेर्न मिल्ने टेलिभिजन पनि सार्वजनिक गरेको थियो । एस ९ सी नामक उक्त टेलिभिजनको स्क्रिन सिधा नभई केही घुमाउरो थियो ।–एजेन्सीहरुको सहयोगमा